दरका नाममा दारु खानु संस्कृति हो कि विकृति ?| Nepal Pati
नेपाली हिन्दू महिलाहरुको महान चाड तिज आउन केही दिन बाँकी नै छ । तर यतिबेला दर खाने नाममा काठमाडौं लगायत अन्य प्रमुख शहर बजारका पार्टी प्यालेशहरुमा महिलाहरु पैसा उठाएर दर खाने प्रचलन निकै फस्टाउँदै आएको छ । बिगतका बर्षहरुमा भन्दा यसपालि तिज आउनु भन्दा एक महिना अघिदेखि दर खाने प्रचलनमा कमि भने आउँदै गएको देखिन्छ । दर खाने नाममा केही हुने खाने महिलाहरु महंगा गरगहना र साडी प्रदर्शन गर्दै चाडलाई फेशन, व्यापार र धनि गरिवबीचको दुरी मापन गर्ने यन्त्रका रुपमा बिकाश गर्दै लागिएको पाइन्छ । यसले समाजमा हुनेखाने र हुँदाखानेबीच फाटो ल्याउँदै छ ।
हुने खानेले त दरका नाममा मिस्ठान्न भोजन ग्रहण र दारु पनि सेवन गर्लान तर मन भएर पनि धन नभएकाहरु उनीहरुको हर्कतदेखि कत्ति बिरक्तिदा हुन ? उही नारी कोही चाहीँ तिजका नाममा एक महिना अघिदेखि दर खाएर नाचेको नाच्यै अरु चाहिँ गिट, ढुंगा, बालुवा, इट्टा बोकर, घाँस दाउरा गरेर कम्मर भाँचेको भाँचै । यो बिभेद अन्त्यका लागि आखिर कसले हिम्मत गर्ने ? केही महिलावादीहरु यस्ता पनि छन् कि मात्र पुरुषलाई सत्तो सराप गरे पछि महिला अधिकार प्राप्ति हुन्छ भन्दै भाषण ठोक्छन् र मिडियामा विचार सम्प्रेषण गर्छन् । आखिर ती महिलावादी नेतृ तथा एनजिओ आइएनजिओका तलवधारीहरुले तिजका बारेमा यस्तो बिक्रिति नभित्र्याऔँ भनेर सचेतनाका स्वर र आवजहरु उरान्न किन सक्दैनन् ?
तर, यहाँ महिलाले दारु खान हुन्न भन्न खोजिएको होइन । फेरी तिनै महान महिलावादी दिदी बहिनीहरुले प्रस्न र गाली दुबै गर्लान, के तिमी पुरुषहरुले मात्रै खानका लागि दारु बनेको हो र ? तर यहाँ प्रसंग हो दरको । दरका नाममा दारु खानु कत्तिको संस्कारयुक्त हुन्छ, कत्तिको शोभनीय हुन्छ ? दर भनेको के हो ? र यो कतिबेला, किन खाइन्छ भन्ने यसको आफ्नो छुट्टै महत्व छ ।
तिज पर्वमा बिवाह गरेर पठाइएका छोरी चेलीहरुलाई निम्ता गर्ने चलन परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ । अरु बेला निम्ता गरेर बोलाइए पनि तिजका बेला भने छोरी चेलीका घरमै माइती पक्षबाट धाएरै लिन जाने प्रचलन छ । तिजमा बिशेष गरी बिवाहित महिलाहरु आफनो श्रीमान्, बाल, बच्चा, परिवार र स्वयम् आफ्नो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुका कामना गर्दै ब्रत बस्ने गर्छन् भने अबिवाहित महिलाहरु आफुले सोचे अनुरुपको पति पाउँ भन्दै बर माग्दै ब्रत बस्ने गरेको धार्मिक ग्रन्थहरुमा पाइन्छ । ब्रत बस्ने अघिल्लो रात महिलाहरु दर खाएर रमाउने पनि गर्दछन् । दरमा मिठाई, खिर लगायतका परिकार पर्दछन् ।
तर, दरका नाममा दारु खानु र एक महिनादेखि पार्टी प्यालेशहरुमा भेला हुनु संस्कृति हो कि विकृति ? मनिस जति जति शिक्षित र चेतनशील हुँदै जान्छ त्यत्ति नैं उबाट सँस्कृती र सँस्कारमाथि हमला हुने गरेको हामीले पछिल्लो समय देख्दै आएका छौँ । समाजमा भएका कुरिती, कुसँस्कार, कुप्रथा र अन्धबिस्वासहरु चेतनशील प्राणी भएको नाताले मानबजातिले बदल्न र परिवर्तन गर्न थाल्ने हो भने र समावादको बाटोमा हिँडेका आम नेपाली मानिसले धनी, गरिव, तल्लो र माख्लो जात जस्ता घृणित कार्य नगर्ने हो भने हामी चाँडै प्रगति पथमा लम्किन सक्ने थियौँ ।